यौ/न सम्प”र्क गर्दा मास्क लगाउन सुझाव……. – Dailny NpNews
यौ/न सम्प”र्क गर्दा मास्क लगाउन सुझाव…….
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र ०६, २०७८ समय: १३:१५:२८
न्युयोर्क । अमेरिकाको न्युयोर्कमा को’रो’ना महामारीको अवधिमा यौ\_न सम्प’र्क गर्दा मास्क लगाउनुपर्ने भन्दै आफ्नो गाइडलाइन अपडेट गरेको छ ।
न्युयोर्कका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यसअघि सबैलाई से\_क्स पार्टनर’सँग सुरक्षित रहने बताएका थिए । गाइडलाइन अपडेट गर्दै टाढा रहेका जोडीहरूलाई भेट्ने क्रममा मास्क लगाएर मात्रै यौ\_न सम्प’र्क गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
यौ\_न सम्प’र्क’को अवधिमा को’रो’ना भाइरस स’र्न’सक्ने भन्दै सचेत गराउन यस्तो सुझाव दिइएको बताइन्छ । ‘अनुहार छोप्ने मास्क लगाउनू, यौ\_न सम्प’र्क’को अवधिमा नाक, मुख छोप्नु वा मास्क लगाउनु उचित हुन्छ । यद्यपि यो तपाइँको व्यक्तिगत कुरा हो’, गाइडलाइनमा उल्लेख छ ।
यौ\_न सम्पर्कको अवधिमा लामो स्वास फेर्दा वा अंकमाल गर्दा को’रो’ना भाइरस सर्न’सक्ने भन्दै न्युयोर्कका स्वास्थ्यकर्मीहरूले गाइडलाइन मार्फत सुझाव दिएका हुन् । यस्तै महामारीका बेला यौ\_न सम्प’र्क’को बेला यौ\_न सम्प’र्क’मा पनि सिर्जनात्मक हुन गाइडलाइनले सुझाव दिएको छ ।
गत महिना इंग्ल्याण्डमा रात काट्ने गरी बाहिर जानु र अरु’सँग यौ’न सम्प’र्क गर्न नपाइने भन्दै कानून नै लागु गरेको थियो । यसअघि अमेरिकाकाे न्युयाेर्क टाइम्सकाे एक रिपाेर्ट अनुसार याै\_न सम्प’र्क’काे क्रममा काे’राे’ना भाइरस सर्दैन । तर चुम्बन गर्दा सर्न’सक्ने तथ्य पुष्टि भएकाे छ ।
हामीले दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने कतिपय चिजहरु लगातार लामो समयसम्म प्रयोग गरिरहेका हुन्छौ । हामीलाई थाहा हुदै यी चिजहरु कति लामो समयसम्म प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर ।